के रहेछ राज कुन्द्राको प्लान बी ? ह्वाट्सयाप च्याटबाट नयाँ खुलासा ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > मनाेरंजन > के रहेछ राज कुन्द्राको प्लान बी ? ह्वाट्सयाप च्याटबाट नयाँ खुलासा !
July 21, 2021 July 21, 2021 News Desk21
एजेन्सी : अ’श्ली’ल सामग्री अर्थात् पो’र्नो ग्राफीको केसमा फसेका भारतीय व्यापारी राज कुन्द्राको ह्वाट्सयाप च्याटबाट नयाँ नयाँ खुलासा भइरहेका छन् । आफू प्रहरीको राडारमा पर्ने उनले पहिले नै थाहा पाइसकेको च्याट बाट थाहा हुन्छ । त्यसका लागि उनले प्लान बी पनि बनाएका रहेछन् । सोमवार राति प’क्रा उ परेका कुन्द्रालाई मंगलवार किला कोर्टले उनको सहयोगी रायन थोर्पका साथ जुलाई २३ सम्मका लागि प्रहरी रिमा’न्डमा पठाएको छ ।
प्रहरीले कुन्द्राका विरु’द्ध प्रमाण जुटाइरहेको छ । ह्वाट्स’याप च्याट कुन्द्राका लागि सबभन्दा ठूलो सम’स्या बनेको छ। कुन्द्रा विरु’द्ध पो’र्न फिल्म बनाएको र संसारभरि बेचेको आ’रोप छ। हटशट याप सस्पेन्ड भएपछि राज कुन्द्राले प्रदीप बख्शीसँग मिलेर ह्वाट्स यापमा प्लान बीको उल्लेख गरेका छन् । कुन्द्राको प्लान बीको नाम बो’लिफेम हो । उमेश कामत र कुन्द्राबीचको च्याटमा कुन्द्राले पीएलाई समाचार पठाएको देखिन्छ ।
त्यसमा पोर्न भिडियो प्रसारण गर्ने सातवटा ओटीटी प्ल्याटफर्महरूका मालिकलाई प्रहरीले समन पठाउन सक्छ भनी लेखिएको छ । त्यसमा पो’र्न सामग्री राख्न नपाउने अवस्थामा आफूहरूले बो’लिफेम तयार गरेर राम्रो काम गरेको कुन्द्रा बताउँछन् । बो’लफेम भने को फिल्म देखाउने याप हो । कुन्द्राले भविष्य लाइभ कन्टेन्टमा छ किनकि त्यसको स्क्रीन रेकर्डिङ हुँदैन भने । त्यसैले खासै फरक नपर्ने कुन्द्राले बताए ।
January 19, 2020 February 25, 2021 GRISHI
‘स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान र संक्रमितको ख्याल गरौँ’-वर्षा सिवाकोटी
August 29, 2020 August 29, 2020 GRISHI